Muraayada hore ee mootada ma u sarreysaa sida ugu macquulsan? Waa maxay faa iidooyinkiisa iyo khasaaradiisu? Fiiri xafladda mootada!
Muraayada hore ee mootada ma u sarreysaa sida ugu macquulsan? Waa maxay faa iidooyinkiisa iyo khasaarahoodu? Fiiri xafladda mootada! Muraayada hore ee mootada ayaa loo qaybiyay warshad asal ah iyo warshad ku xigeen. Guud ahaan, muraayada hore ee mootada oo ay weheliso warshaddii asalka ahayd badanaa ...
Ku saabsan Wax soo saarka Akhri wax dheeraad ah
Socdaalka Mootada: 10 Sababood Oo Aad Ugu Baahan Tahay Muraayada Koowaad
1. Sababta Ilaalinta Dabaysha lambarka koowaad waxay umuuqataa mid aan caqli gal ahayn. Waxaan ula jeedaa, taasi waa waxa loogu talagalay, inay dabaysha kaa difaacaan. Waxaa loogu talagalay inay ku kala firdhiyaan dabaysha soo socota agagaarka mootadaada iyo aroun ...
Waa Maxay Faa'iidooyinka Kuxirashada Muraayada Muraayaddu?
RAAXO: BADBAADADA DABAY! Difaaca Dabaysha Muraayadaha ayaa kaa caawin kara la dagaalanka daalka, dhabar xanuunka, iyo culeyska gacanta adoo ka qaadaya dabaysha wejigaaga iyo laabtaada Hawo yar oo jirka ku riixeysa, waxay keeneysaa raacitaan raaxo iyo raaxo badan. Khadkeena gaarka ah ee muraayada ...
Miyaad Iibsanaysaa Muraayada Koowaad ee Baaskiilka?
WAA DHAQAN! Yaraynta qiiqa dabaysha waxay yareysaa daalka raacitaanka. Way fududahay. Hadday tahay safar Axad dheer ama safar toddobaadle ah, feejignaan iyo qaboojiye xagga salka ah waxay si weyn uga caawineysaa inaad ku geyso halkaad u socoto hal xabbo. Dhibaatada w ...
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Baaskiilka Wadada Mootada, Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Bacda Iskuulka ee Peugeot Django, Baaskiil Baaskiil Wadista Baaskiilka, Mootada Daawaha Baaskiil, Baaskiilka Lugta Lugta Baay,